BlazerCoin စျေး - အွန်လိုင်း BLAZR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BlazerCoin (BLAZR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BlazerCoin (BLAZR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BlazerCoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BLAZR – BlazerCoin
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BlazerCoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BlazerCoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BlazerCoinBLAZR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000157BlazerCoinBLAZR သို့ ယူရိုEUR€0.000133BlazerCoinBLAZR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00012BlazerCoinBLAZR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000143BlazerCoinBLAZR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0014BlazerCoinBLAZR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00099BlazerCoinBLAZR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00347BlazerCoinBLAZR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000585BlazerCoinBLAZR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000209BlazerCoinBLAZR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000219BlazerCoinBLAZR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00346BlazerCoinBLAZR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00122BlazerCoinBLAZR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000854BlazerCoinBLAZR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0118BlazerCoinBLAZR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0266BlazerCoinBLAZR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000216BlazerCoinBLAZR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000241BlazerCoinBLAZR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0049BlazerCoinBLAZR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00109BlazerCoinBLAZR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0168BlazerCoinBLAZR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.187BlazerCoinBLAZR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0608BlazerCoinBLAZR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0115BlazerCoinBLAZR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0043
BlazerCoinBLAZR သို့ BitcoinBTC0.00000001 BlazerCoinBLAZR သို့ EthereumETH0.0000004 BlazerCoinBLAZR သို့ LitecoinLTC0.000003 BlazerCoinBLAZR သို့ DigitalCashDASH0.000002 BlazerCoinBLAZR သို့ MoneroXMR0.000002 BlazerCoinBLAZR သို့ NxtNXT0.0123 BlazerCoinBLAZR သို့ Ethereum ClassicETC0.00002 BlazerCoinBLAZR သို့ DogecoinDOGE0.0454 BlazerCoinBLAZR သို့ ZCashZEC0.000002 BlazerCoinBLAZR သို့ BitsharesBTS0.00485 BlazerCoinBLAZR သို့ DigiByteDGB0.00504 BlazerCoinBLAZR သို့ RippleXRP0.000559 BlazerCoinBLAZR သို့ BitcoinDarkBTCD0.000005 BlazerCoinBLAZR သို့ PeerCoinPPC0.000522 BlazerCoinBLAZR သို့ CraigsCoinCRAIG0.0717 BlazerCoinBLAZR သို့ BitstakeXBS0.00671 BlazerCoinBLAZR သို့ PayCoinXPY0.00275 BlazerCoinBLAZR သို့ ProsperCoinPRC0.0198 BlazerCoinBLAZR သို့ YbCoinYBC0.00000008 BlazerCoinBLAZR သို့ DarkKushDANK0.0505 BlazerCoinBLAZR သို့ GiveCoinGIVE0.341 BlazerCoinBLAZR သို့ KoboCoinKOBO0.0359 BlazerCoinBLAZR သို့ DarkTokenDT0.000145 BlazerCoinBLAZR သို့ CETUS CoinCETI0.455